Al-Shabaab oo dil toogasho ku fulisay mid ka mid ah dad Kenyan ah oo gacanta ay ku heyso – idalenews.com
Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegtay inay dil toogasho ah ku fulisay mid ka mid ah dad Kenyan ah oo ay gacanta ku heyso, kadib markii ay dhamaatay mudadii ay u qabteen dowladda Kenya inay ku soo daayaan dadka Muslimiinta ah ee ku jira Xabsiyada dalkaas ee loo qabtay falalka Argagixisinimo.
War ay soo saartay Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in xalay saqdii dhexe ay dil ku fulisay Jonathan Kipkosgei Kangogo oo ah Askari Kenyan ah kana mid ahaa ilaa lix ruux oo Kenyan ah oo ay Al-Shabaab ka soo qafaalatay gudaha dalkaas sanadkii hore.
Al-Shabaab ayaa sheegay in markii waqti iyo muddo ay siiyeen dowladda Kenya ay ka soo jawaabi weysay dalabkooda, isla markaana ay go’aansatay inay dhagaha ka fureysato dhawaaqa muwaadiniinteeda, iyadoo mar kale 72-saacadood u qabatay dadka ay wali gacanta ku hayaan inay dili doonaan, hadii aysan shuruudaha ay u bandhigeen ka soo bixin.
“Hadii 72-saac aysan ku suura gelin inay ku bad baadiso muwaadiniinteeda waa nolol ama geeri, dowladda Kenya waxay qaadaneysa mas’uuliyada dilka maxaabiisteeda”ayaa lagu yiri war saxaafadeedka Al-Shabaab ka soo baxay.
Al-Shabaab ayaa horay muddo saddex todobaad ah ugu qabtay Kenya inay si deg deg ah ku soo deyso dadka Muslimiinta ah ee ku xiran Xabsiytada dalkeeda, hadii ay dooneyo nolosha maxaabiis Kenyan ah oo ay gacanta ku heyso Shabaab.